DIP led screen နှင့် SMD display screen အကြားခြားနားချက် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
အခု, LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်, LED မီးခွက် (အလင်းထုတ်လွှတ် diode) ထုပ်ပိုးနည်းနှစ်မျိုးရှိသည်, အမည်ရ DIP အမျိုးအစားနှင့် chip SMD အမျိုးအစား. ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်, DIP LED မျက်နှာပြင်ကိုအဓိကအားဖြင့်ပြင်ပ display တွင်အသုံးပြုသည်, SMD LED ကိုမိုးလုံလေလုံ LED မျက်နှာပြင်ကြီးမှာအသုံးပြုနေစဉ်. သူတို့အကြားခြားနားချက်အခြားဘာလဲ?
In-line LED ၏အထုပ်သည် potted ဖြစ်သည်. potting ၏လုပ်ငန်းစဉ်အရည် epoxy ဗဓေလသစ်ကို LED မှိုမှို၏လိုင်ခေါင်းထဲသို့ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ထို့နောက်ဖိ LED bracket ကထည့်ပါ, epoxy ဗဓေလသစ်ကိုကုသရန်မီးဖိုထဲသို့ထည့်ပါ, ထို့နောက်ဖွဲ့စည်းရန်မှိုလိုင်ကနေ LED ကိုခွဲခြား. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဟာအတော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်, တန်ဖိုးနည်း, မြင့်မားသောစျေးကွက်ဝေစုရှိပါတယ်. တိုက်ရိုက် plug-in အမျိုးအစားသည်ကြီးမားသည်။ manual plug-in သို့မဟုတ် AI စက်ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်. ၎င်း၏မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်ရိုးရိုးရေစိုခံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, ၎င်းကိုပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်.
SMT LED သည် circuit board ၏မျက်နှာပြင်နှင့်ကပ်ထားသည်, SMT အပြောင်းအလဲနဲ့ reflow soldering များအတွက်သင့်လျော်သော. ၎င်းသည်တောက်ပမှုကဲ့သို့သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်, ကြည့်ရှုထောင့်, ပြား, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု. ပိုမိုပေါ့ပါးသော PCB ဘုတ်နှင့်ရောင်ပြန်အလွှာပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်. တိုးတက်မှုပြီးနောက်, In-line LED ၏ပိုလေးသောကာဗွန်သံမဏိပင်ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်, သော display reflection layer သည် epoxy resin လိုအပ်သည်. ရည်ရွယ်ချက်မှာစကေးကိုလျှော့ချရန်နှင့်အစိတ်အပိုင်းကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည် 。 ဒီလိုမျိုး, အသွင်အပြင် Mount LED သည်ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်တစ် ၀ က်ကိုအလွယ်တကူလျှော့ချနိုင်သည်, နောက်ဆုံးတော့အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုစုံလင်စေပါ. SMD LED ကိုအိမ်တွင်း LED ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၏အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်နည်းပညာ၏အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ, SMD LED ၏အရောင်အသွေးသည်များစွာတိုးတက်လာသည်, နှင့်ရေစိုခံကုသမှုကိုလည်းကောင်းစွာကုသနိုင်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်, လယ်ကွင်း LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်တွင် SMD LED အသုံးပြုမှုတိုးပွားလာသည်.
ကြိုးမဲ့ LED မျက်နှာပြင် 4G နှင့်အတူ, ဝိုင်ဖိုင်,ဂျီအက်စ်အမ်, GPRS, CDMA, 3ဂ, usb disk ကို